Zeziphi ezona Parks ziPhakamileyo zeSizwe eYurophu | Gcina A Isitimela
ekhaya > Ukuhamba eYurophu > Zeziphi ezona Parks ziPhakamileyo zeSizwe eYurophu
Zeziphi ezona Parks ziPhakamileyo zeSizwe eYurophu
Uhambo loLoliwe, Uloliwe wokuhamba eBelgium, Qeqesha uhambo eJamani, Qeqesha uhambo eNorway, Uloliwe eSwitzerland, Ukuhamba eYurophu
(Wagqibela ukuhlaziywa nge-: 12/11/2021)
Ingaba wena uthanda ukuba phandle enkulu? Esithetha amahlathi, amachibi, izityalo, nezilwanyana. bentaba, ngesithuthuthu, kunye nokulunga komoya omtsha. Ke babone ukuba ezininzi iipaki zesizwe elihle eYurophu, kwaye indlela apho ngololiwe.
Ukhohlwe izihlwele, ukhohlwe esimhlophe, ukulibala imizi ukuthenga, uze ukhombe i iipaki zesizwe best eYurophu.
Nakuba ngokundwendwela zemvelo iindawo ezinika umdla zotyelelo ezifana amahlathi kunokuba ezintsonkothileyo kwi uhambo, ukuba akukho sizathu ukuba zingabandakanywa. Ezi zemvelo zinika umahluko okuphelele ephithizelayo imizi, kunye nophando nje oluncinci, uyakufumanisa ukuba kulula ngokumangalisayo ukufikelela ngoncedo lweGcina uloliwe.
National Parks eYurophu: Germany ne Switzerland
Nangona igama layo edidayo, Saxon Switzerland National Park ziyafana kakhulu Jemani . Ngummandla omkhulu wendalo onqamleza iNtshona Czech Republic. Yinto kuphela park yesizwe iliwa elo lizwe, kodwa kwakhona ke zigutyungelwe emahlathini ebalaseleyo. Iintloko ezininzi kummandla wokunyuka, kodwa kukho kananjalo zinembali enika umdla ukuba ukuhlola, including the Konigstein Fortress.
Esi sixeko sikufuphi elikhulu paki Dresden, ekulula ukufikelela ngololiwe ukusuka enkulu Germany. ukusuka apho, oololiwe S-Bahn ukuxhuma Saxon Swizalend zonke 30 imizuzu.
Xa uqubha Germany, sicebisa ukuba uvakashele Ihlathi Elimnyama. Mhlawumbi ephakathi yehlathi eYurophu edume, lena ayiyo enye ukuphoswa. Lo mmandla weentaba umangalisayo kumazantsi-ntshona eJamani unawo onke amahlathi ashinyeneyo, somdlalo ezintabeni, nasemizaneni elidala. Yinto ekhaya ukuya iwotshi nengabangaba abasusela kwi-1700s, yaye iilali ezininzi Ndiziva ndilibambile ngexesha elikude. the intsomi umoya ihambelana ngokugqibeleleyo ukuba ukungazinanzi ngokupheleleyo ehlabathini lokwenene, ukuba yiloo nto oyikhangelayo!
Enye yeendlela eziphambili amava i Forest Black kukuba ngololiwe. I-Black Forest umgca ubaleka phakathi Offenburg ne Konstanz. Inika iimbono ezimangalisayo zommandla kunye umisa kwiidolophu ezininzi apha endleleni.
Leipzig ku Dresden Uqeqesha
Hallerbos Forest, okanye "I Blue Forest", lihlathi eyothusayo ofezekileyo elide bemvelo maphepha. Iikhaphethi ezinkulu zebluebells ezingena ngaphakathi yee-April nyaka ngamnye unike eli hlathi lihle igama lalo. Kukwakho giant umsequoia imithi ezenza utyelelo kule twa esihle ilizwe libe namava ekuvuseleleni.
Qaphela ukuba elona xesha lifanelekileyo kutyelela Hallerbos ukubamba bluebells yahlukile kunyaka ngamnye kwaye kuxhomekeke kwimozulu. I msinyane ubushushu, phuthuma ukuba iintyatyambo okwentyatyambo. Ngoku kuya kubakho ixesha enkulu ukuya, njengoko kubonakala ngathi kufudumele kancinci emva komhla ka-Epreli walo nyaka. Kodwa kukho uhlanga nxamnye ixesha sezulu siqala ukufudumala kwakhona kuthetha ukuba imithi ufumane amagqabi zabo, ukubandezana i bluebells kwelanga, leyo eyenza ukuba bavule nombala. Akukho esihle Instagram pics!
Xa bluebell isizini lisondela, kwiwebhusayithi izithuba Hallerbos updates ngemihla (ngexesha leveki) malunga nemeko bluebells. Oko abafoti ndlela kunye nezinye iindwendwe bazi nokuba nangoku ekuseni kakhulu ukuya, okanye nokuba umelwe Khawuleza.
Kukhona njalo oololiwe e Brussels ku Halle ukuba uthathe nje 16 imizuzu. ukusuka apho, ukubamba inombolo ibhasi TEC 114 ukuya emnyango ehlathini.
Ukulungele ukufumana imvelo yakho? Emva koko iyalela itikiti ukuya kwelona likhulu outdoors ngoncedo Save A Isitimela. Akukho ntlawulo ezifihliweyo. zokuhamba omkhulu nje!
EBrussels ku Halle Uqeqesha
Antwerp ku Halle Uqeqesha
Brugge ku Halle Uqeqesha
EGhent ku Halle Uqeqesha
IPAKA YESIZWE HARDANGERVIDDA, NOROWE
Le paki enkulu kunazo zonke ku Norowe kuba yiparadesi i phandle-yomntu. Yasethafeni bandise, omnye kumathafa eroded inkulu baseYurophu 2,500 khilomitha square, ehlanganiswa moorlands scrubby kunye namachibi amaninzi, imifula, nasemifuleni. Ngokupheleleyo ngaphezu treeline, ungabona iimayile emimoyeni yonke, okwenza ube Indawo okukhulu nokunyuka.
Ukuba ucwangciso a long trek, qiniseka ukuba zokupakisha pole lokuloba: amanzi apha agcwele iintlanzi. Abathandi beenyamakazi baya kufumanisa ukuba iHardangervidda yenye yeepaki zikazwelonke ezilungileyo kubo, njengoko neenkomo zayo ezinye nje enkulu ehlabathini. Akukho nto kakhulu njengokubukela amawaka adle lihamba ngokuvisisana phesheya emathafeni; ukuba loo mbono wonke kufuneka ubone ngaxa lithile ebomini babo.
Xa sele e Oslo, udinga ukufika Hardangervidda ngololiwe Unako ukuthatha uloliwe ukusuka Oslo eBo e Telemark. Ukusuka apho ukwazi ukubamba “Haukeliekspressen” ku Rauland. Unakho ukuthatha Bergen Railway ukusuka Oslo eziliqela iindawo amanqaku yokuqala enkulu ukuhlola Hardangervidda - Flam ukuba yena, Finnish, Haugastol, Ustaoset, kunye noGeilo.
Ukusuka Bergen ku Hardangervidda ngololiwe, Isitimela saseBergen siyema kwiindawo ezininzi zokuqala iindawo zokuhlola i-Hardangervidda-Myrdal, Finnish, Haugastol, Ustaoset, kunye noGeilo. Kwakhona thatha ngololiwe ukuya Voss kunye ibhasi ukusuka Voss ukuya Eidfjord.
Ukulungele ukongeza ezinye Parks best kaZwelonke eYurophu kuluhlu yakho emele? Vumela Gcina A Isitimela kukunceda ufike khona ngokukhawuleza, ngaphandle zafakwa, iindleko ezifihlakeleyo.
Ingaba ufuna kuzakulungisa post yethu blog kwi sayithi yakho, ungakwazi noba uthathe iifoto zethu kunye nombhalo kunye nje zisinika ngetyala ngekhonkco kule post blog, okanye cofa apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fnational-parks-europe%2F%3Flang%3Dxh- (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
#I-Europepark	#Iipaki zesizwe	#sifumafumase	europetravel	uhambo olude	train Travel	zoorbelgium	travelgermany	travelnorway	iingcebiso zokuhamba
Uhambo loLoliwe, Qeqesha ukuhamba iOstriya, Uloliwe wokuhamba eBelgium, Uloliwe ohamba eDenmark, Qeqesha uhambo eFrance, Qeqesha uhambo eJamani, Qeqesha uHambo lwaseHungary, Uloliwe kuhambo Italy, Uloliwe Ukuhamba ngeLuxembourg, Uloliwe eSwitzerland, Uhambo lukaloliwe lwaseNetherlands, Ukuhamba eYurophu
Uloliwe wokuhamba eBelgium, Qeqesha uhambo eFrance, Qeqesha uhambo eJamani, Uloliwe Travel Holland
Qeqesha ukuhamba iOstriya, Qeqesha ukuhamba iBritane, Uloliwe ohamba eDenmark, Qeqesha uhambo eFrance, Qeqesha uhambo eJamani, Uloliwe kuhambo Italy, Uloliwe eSwitzerland, Uhambo lukaloliwe lwaseNetherlands, Qeqesha uKhenketho e-UK, Ukuhamba eYurophu